Maibahoaka - Ivato Ravan’ny afo ny 80%-n’ilay orinasa
Nisy trangana hain-trano nianjady ny orinasa iray teny Maibahoaka - Ivato, ny marainan’ny 13 desambra teo nanomboka tamin’ny 2 ora sy sasany.
Tamin’ny 5 ora latsaka fahatelony vao voafehy tanteraka ny afo. Araka ny fampitam-baovaon’ny zandary eo Ankadilalana. Vokatry ny fifampikasohan’ny rian’aratra miiba sy miabon’ny herinaratra no nahatonga ny loza. Fotodrafitrasa sy fanaka ary fitaovam-pamokarana miaraka amin’ny vokatra maro izay mitentina an-jatony tapitrisany maro no lasa lavenona izay 80% tamin’ilay orinasa. Efa nanezaka araka izay tratrany hatrany ny mpamonjy voina fa noho ny akora izay andairan’afo no nampihanaka azy. Tsy nisy kosa ny aina nafoy sy ny naratra. Nahazo vahana ny hain-trano noho ny herinaratry ny jirama tato ho ato. Manana andraikitra amin’ny fisorohana ny loza amin’ny fanamarihana ireo fitaovana efa-mihatranainy, indrindra ny fonona taribin’ny tompon-trano sy ny orinasam-panjakana misahana io herinaratra io.